त्रिपालमुनि सास्ती झेल्दै मराङका पहिरोपीडित- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
त्रिपालमुनि सास्ती झेल्दै मराङका पहिरोपीडित
आश्विन २१, २०७७ घनश्याम खड्का
मराङ (म्याग्दी) — धौलागिरि गाउँपालिका–६ मराङको पन्थोकस्थित भलिबल मैदानको डिलमा लस्करै त्रिपालले बेरिएका पाँचवटा टहरा छन् । तिनमा न ढोका छ न झ्याल । कसैले छानोमा जस्तापाता राखेका छन्, कसैले त्रिपालले नै छोपेका छन् । उनीहरू पल्लो रिख टोलमा आएको पहिरोले घर बगाएपछि सुरक्षित थलो खोज्दै यहाँ आएका हुन् ।
रिख टोलका भीमप्रसाद जुग्जालीले पहिरोमा श्रीमती, बुहारी, नाति र नातिनी गुमाए । असार २६ देखि त्यही मैदानमा त्रिपाल टाँगेर छोराहरू पुरन र सुमन तथा छोरी बिर्सनासँग बस्दै आएका छन् ।
‘पहिरोले जहान परिवार र घरसम्पत्ति पुरे पनि आशा पुरेको छैन । सरकारले कहीँ घर त बनाइदेला, कुटोकोदालो गर्ने बारी यहीँ छँदै छ,’ उनले भने ।
छेवैको अर्को छाप्रोमा भीमप्रसादका भाइ धनबहादुर, उनका छोराछोरी र बहिनी बस्छिन् । पहिरोले धनबहादुरको पनि घरसमेत श्रीमती, एक छोरा र छोरी पुरेको थियो । रिखका आठमध्ये पाँच घर पहिरोले पुरेको थियो ।
‘पीडाको बेला कसरी चाडपर्व मनाउनु छ र ? छोराछोरी साना छन्, गाउँमा अरूले रमाइलो गर्दा, नयाँ लगाउँदा यिनको मन कसरी बहलाउँला भन्ने चिन्ता लागेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सहयोग गरे त्यहीँ बारीको छेउमा छाप्रो हालेर केटाकेटीलाई राख्न हुन्थ्यो ।’
मराङ बेंसीको अर्को पाखोमा पनि पहिरो प्रभावितहरू त्रिपाल टाँगेर बसेका छन् । तिनैमध्येको एउटामा गोरे गर्बुजाको सात जनाको परिवार छ । एउटा कुनामा ८–१० वटा कुखुरा पनि अटेका छन् । एक जनाले कपडा फेर्नुपर्दा परिवारका सबै सदस्य बाहिर निक्लनुपर्ने बाध्यता छ । सास्ती बढेपछि गोरेले नजिकै स्थानीयको पिंढी मागेर छोराबुहारी र अर्को एक घरको पिंढीमा साना छोराछोरी राखेका छन् । खाना सगोलमै खान्छन्, सुत्न मात्र बाहिर जान्छन् । छाप्रोमा बिजुली पनि छैन ।
मराङको टुप्पोमा पर्छ, राम्चे बस्ती । गुजुप्प परेको बस्तीमा लाम्गादे, सुनार र सिर्पाली गरी तीन परिवारका ९ जनाको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको थियो ।
अहिले बस्तीछेउकै पाखोमा त्रिपालले बेरेको छाप्रोमा जस्तापाताले छाएर बसेका छन् पीडितहरू । यिनै विस्थापितमध्येकी हुन्, चनमती लाम्गादे कामी । जेठी बुहारीसँगै नाति र नातिनी गुमाएकी चनमतीका कान्छा छोराबुहारी अर्को घरमा बस्ने भएकाले बाँचे । घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएकी कान्छी बुहारी सात महिनाकी गर्भवती थिइन् । गर्भ नजोगिए पनि बुहारीको ज्यान जसोतसो जोगिएको छ ।
मृत्युपछि आएको राहतले ऋण भुक्तानी
चनमतीको छाप्रोछेउमै बस्छिन्, राजमती सिर्पाली । उनका जेठो छोरा मनबहादुर, बुहारी, नाति र नातिनी गरी चार जनाले ०७६ असार २६ गतेको पहिरोमा ज्यान गुमाए । मनबहादुर रोजगारीका लागि दुई वर्षअघि मलेसिया पुगेका थिए । तर, राम्रो काम नभएपछि बेखर्ची भएर घर फर्के ।
विदेश जाँदा स्थानीय जनजागृति उपभोक्ता सहकारीबाट एक लाख रुपैयाँ ऋण झिकेका थिए । त्यो ऋण अझै ५० हजार बाँकी थियो । मनबहादुरले लिएको ऋण उनको मृत्युपछि उनकै नाममा आएको राहतबाट भुक्तानी गरिएको छ । आमा राजमतीले सरकार र विभिन्न दाताले दिएको राहतबाट छोराको ऋण तिरिदिएकी हुन् ।
‘छोराको परिवारै पहिरोमा सकियो । सहकारीमा उसको नामको ऋण थियो । तिरिदिएँ, अब उसको आत्माले शान्ति पाउनेछ,’ मजेत्रोको सप्कोले आँसु पुछ्दै उनले भनिन्, ‘त्यही दिन टीकाटालो गरी भित्र्याएकी बुहारी पहिरोले कम्मरको हाड भाँचिएर घाइते छ । कसरी खाली, पीर लाग्छ ।’
एकीकृत बस्तीको पहल
संघीय सरकारले मृतकका परिवारलाई दुई लाख र एकै परिवारमा एकभन्दा बढी मृतक भए संख्याअनुसार थप एक–एक लाख राहत दिएको छ । बेपत्ताका परिवारलाई पनि मृतकसरह राहत वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
धौलागिरि गाउँपालिकाको ६ नम्बर वडा कार्यालयका अनुसार सरकारी राहतबाहेक विभिन्न व्यक्ति, संघ/संस्थाबाट प्राप्त रकमबाट मृतकका परिवारलाई ३ लाखभन्दा बढी नगद र घर पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई ६५ हजारसम्म थप उपलब्ध गराइएको छ । पहिरोले मराङ र बिमका विभिन्न बस्तीमा गरी १४ परिवारका ३१ जनाको ज्यान गएको थियो ।
‘नगद, खाद्यान्नसमेतका राहत सामग्री पीडितको वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार वितरण गरेका छौं । सरकारबाट प्राप्त नगद राहत बैंक र अन्य राहतलाई स्थानीय सहकारीमा खाता खोल्न लगाई जम्मा गर्न लगाइएको छ,’ वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीले भने, ‘टहराको वास छ, लुटपाटको जोखिम हुने ठानेर अत्यावश्यकबाहेकको पैसा साथमा नराख्न भनेका छौं ।’
पहिरोले घर नभत्किएकाहरू वर्षा रोकिएर गाउँ फर्कन थालेपछि घरबास बगाएकाहरू नियास्रो मान्न थालेका छन् । ‘पालकै वास भए पनि छिमेकी थिए । आलो–पालो टहरा कुर्थ्यौं, अब घर भएकाहरू पहिरो पन्छाएरै पनि फर्के । हामी कहाँ जाने ? यहाँ बस्न कता–कता डर लाग्न थालेको छ,’ चनमतीले भनिन् ।
पहिरोले प्रभावित मराङका बस्ती स्थानान्तरण गर्न धौलागिरि गाउँपालिकाले एकीकृत बस्ती विकासको सम्भावना र पुनःस्थापनाको सम्भावना खोज्न थालेको छ ।
‘बस्नै नहुने बस्ती स्थानान्तरण गर्ने, बस्ती बसाउन योग्य सुरक्षित जग्गाको पहिचान गर्ने, भएका बस्ती संरक्षण गरी विस्थापितलाई पुरानै स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेका छौं । प्रभावित क्षेत्रमा सुझाव मागेका छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन् ।
प्रकाशित : आश्विन २१, २०७७ १३:११
आश्विन ७, २०७७ घनश्याम खड्का
म्याग्दी — मंगलबार साँझदेखि लगातार वर्षासँगै आएको पहिरोले सदरमुकाम बेनी जोड्ने सबै सडक अवरुद्ध भएका छन् । बेनी–पोखरा सडकअन्तर्गत सहस्रधारामा पहिरो जाँदा यातायात ठप्प छ ।
त्यस्तै बेनी–जोमसोम सडकको जलेश्वर, चमेरे, गुइँठे र रुप्से छहरानजिक सडकमा पहिरो खसेको छ । सोही सडकको बेगखोलामा बाढी आउँदा पैदल यात्रासमेत मुस्किल भएको छ ।
सदरमुकामबाट बागलुङ पश्चिम बुर्तिबाङ जोड्ने सडकको घुमाउने र दरबाङनजिक पहिरो झरेको छ । बेनी नगरपालिकाको रानीवन तथा खबरामा पहिरोले सडक बगाउँदा यातायात अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सदरमुकाम जोड्ने सबै सडकमा यातायात अवरुद्ध भएकाले कहीँ विपद् आइलागे उद्धारका लागि पुग्न समस्या भएको जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । ‘मंगलबारबाट लगातार पानी परिरहेको र अझै केही दिन भारी वर्षा हुन सक्ने जोखिम रहेकाले उच्च सतर्क अवस्थामा छौं । स्थानीय तहलाई पनि सतर्क अवस्थामा रहन समन्वय गरेका छौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भने ।
प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ १०:१०